मदिरा र खगेन्द्र संग्रौला - Naya Patrika
प्रस्तुती : विश्वास खड्काथोकी
साँझको ५ बज्दै थियो । सेतो झोला बोकेका, सेतै कपालवाला व्यक्ति चक्रपथमा उभिइरहेको मेरा आँखाले टाढैबाट ठम्याए । उनी थिए, लेखक खगेन्द्र संग्रौला । निम्त्याउनेभन्दा पाहुनाको छिटो उपस्थितिले मलाई थोरै–थोरै अप्ठ्यारो लागिहाल्यो । तर, हतारमा हामफालेँ, उनी भएतिर । ‘सरी ! दाइ कुराएँ,’ मैले सम्मान पोखेँ । ‘कुराइमा मलाई कुनै दिग्दत छैन, जिन्दगीका मोडमा कुर्दै–कुर्दै कपाल फुल्ने हालसम्म आइपुगेको त हो नि भाइ,’ मप्रति प्रेम बिसाए ।
चक्रपथ गणेश मन्दिरको छेवैमा उभिएर यति बातचित भए । तर, मन्दिरमा हामी प्रसाद चाख्न भेट भएका थिएनौँ । मदिरा संवादका लागि समय जुराइएको थियो । तर, मदिरा पिउन होइन, मदिरा पिउँदाका कहानी सुन्न समय मिलेको थियो । फिस्स हाँस्दै उनले भने, ‘जाऊँ त भाइ अड्डातिर ।’ उनको अड्डातर्फ पछि–पछि लागेँ म ।
नुब्बु सेकुवा कर्नर ।
यही बोर्ड मुन्तिरबाट हल्का अँध्यारो कोठातिर छिरे संग्रौला । म पछि–पछि । कुनै वेला उनी भन्थे, ‘यस्तो अमूल्य पैसाले किन बियर पिउछौँ, किन वाइन पिउँछौँ ? त्योभन्दा त बरु पानी पिऊ ।’
तर, आज उनले सुरुमै वाइन मगाए, हिनुवा वाइन । गोलाकार सिसाको ग्लासमा ‘माल’ खन्याए । वाइनको बोतल ट्वाक्क बिसाउँदै मतिर हेरेर मलिन हाँसे र सुनाए, ‘रक्सी मेरो जिन्दगीको पादटिप्पणी हो । यो मेरो शीर्षक होइन । रक्सीभन्दा ठूला कुरा अरू नै छन्, मेरो जिन्दगीमा ।’
संग्रौलाको निजी मामला गिजोल्न मलाई पनि खासै रुचि थिएन । उनको मदिरा मोहबारे सडकदेखि चिया पसलसम्म जुन खालका किस्साहरू सुनिन्थे, म त्यसैको यथार्थ बुझ्न चाहन्थेँ । उनले वर्षौंदेखि पिएको मदिराको गन्ध सुँघ्न हौसिएको थिएँ ।
वाइन पिइरहेका संग्रौलाका औँलाको कापोमा निकैबेरसम्म चुरोटको खिल्ली देखिएन । चुरोट अभावको भाव पनि अनुहारमा पढ्न सकिनँ । परिस्थितिले मलाई एकछिन सोच्न बाध्य बनायो, सार्वजनिक स्थानमै चुरोटको धुवाँ उडाउँदै हिँड्ने संग्रौला यिनै होइनन् ? त्यसैले मदिराभन्दा पहिले उनीसँग धूमपानको किस्सा बुझ्न मन लाग्यो ।
एक चुस्की वाइन स्वाट्ट हान्दै सुनाउन थाले, ‘यति धेरै चुरोट पिएँ कि मैले पिएका चुरोटहरू जोड्ने हो भने काठमाडौंदेखि मुग्लिनसम्म लहरा बन्थ्यो होला । १६–१७ को उमेरदेखि नै बिँडीमा लत बस्यो । ५५ वर्षको उमेरसम्म आउँदा चारपटक धूमपान छाडेँ । अहँ, सधँैका लागि त्याग्न सक्दै सकिनँ । चौबाटोमा चुरोट पिएँ, पेटीमा उभिएर पिएँ, लत बढ्दै गएपछि माइक्रो बसभित्रै पिइयो । त्यतिवेला धेरै साथीहरूको मलाई आपत्तिपूर्ण निवेदन थियो, तिमीले आफ्नो उपयोगी मस्तिष्कलाई मारिरहेका छौ । तर, मलाई त्यो निवेदनले छोएन ।’
संग्रौला आफ्नो चुरोट जिन्दगी सुनाउँदै जाँदा फसिरहेका थिए, विगतमा । त्यसैले त वाइनको गिलासलाई मुखसम्म चढाउन उनको हातले बिर्सिएको थियो । धाराप्रवाह बोल्दै गए, ‘डेढ वर्ष पहिले मेरो छाती निकै दुख्न थाल्यो । स्वास्थ्य जाँच गराएँ । तत्काल चुरोट छाड्नुप¥यो । विगत एक वर्षदेखि मैले चुरोट पिइरहेको छैन । त्यसअघि दिनमै ३०–३५ खिल्ली चुरोटका धुवाँ मेरो फोक्सोमा पुग्थ्यो । डाक्टरले भन्नुभएको थियो– तपार्इं निकै स्ट्रोङ हुनुहुँदो रहेछ । यतिका चुरोट पिए पनि तपार्इंको फोक्सो पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छैन । रिकभर हुने सम्भावना पनि छ ।’
अब, संग्रौलाको ध्यान वाइनतिरै फर्कियो । सितन सम्झिए । मगाए पापड ।
काठले बारेको सेकुवा कर्नरमा काठकै कुर्सी टेबलमा थियौँ, हामी । यही टेबुल ‘सेयर’ गरेर उनले थुप्रै साहित्यकार, कलाकार, समाजसेवी, नेता, पत्रकारसँग कैयौँ पेग तानेका छन् । कहिलेकाहीँ लेख्दालेख्दै मुड आएन भने यहीँ आएर कालो कफी पिउँछन् रे ! मर्निङवाक गरेर फर्किंदा यहीँ कफी पिएर घर जान्छन् रे ! त्यसैले त होला, सेकुवा कर्नरका धेरै ग्राहक उनका परिवारका सदस्यजस्तै बनेका रहेछन् । आफ्नो निवासनजिकै भएर पनि उनका लागि यो स्थायी अड्डाजस्तै बन्यो, सायद ।
संग्रौला भोड्का र ह्विस्कीका पारखी थिए, पहिले । तर, अहिले वाइनबाहेक छुन्नन् । मलाई यसको राज जान्ने झोक चल्यो । जिज्ञासा बिसाएँ । आफ्नै स्टाइलमा अर्को प्याक तन्काउँदै फिस्स हाँसोमा बोली फुटाए, ‘डाक्टरले नै बाध्य बनाए ।’
संग्रौला उमेरले ७३औँ वर्षमा हिँडिरहेका छन् । यो बुढेसकालमा मदिराको हकमा वाइन नै उनको प्रिय साथी बनेको रहेछ ।
प्रश्न : तपाईंले रक्सी खुवाएको भरमा आर्टिकल लेख्नुहुन्छ रे नि ?
संग्रौलाको शालीन अनुहारमा आक्रोश पोतिएन । कुनै परिवर्तन नै आएन । सायद, यस्ता प्रश्नको सामना उनले पहिल्यै गरिसकेका थिए ।
संग्रौला आफ्नै लयमा बगे, ‘जसले रक्सी खाएर लेख्छ, उसैको आरोप हो यो । मेरो जिन्दगी यति पारदर्शी छ कि, मैले कहिल्यै सफाइ नै दिनुपर्दैन । मलाई कोहीसँग केही माग्नु नै छैन । आफ्नै सीप, क्षमता र बौद्धिकताबाट फलेको आर्जनले जिन्दगी व्यवस्थित गरेको छु । बढी कमाउँदा मीठो खाएको छु, नहुँदा पाँच रुपैयाँमा भट्टीको ठर्रा पनि पिएको छु । मैले कहिल्यै पनि कसैसँग केही मागिनँ भने अब त केको आवश्यकता ? कसैको ढोका ढकढक्याएर मागेको भए के पाउदिनथेँ होला र ?
एकथरी गिरोहले मलाई रक्सीबाजका रूपमा प्रतिविम्बित गरिरहेका छन् । नेपाली समाज विभाजित छ । उनीहरूले, म जन्मेको रक्सी पिएर हो, हुर्केको रक्सी पिएर हो, लेख्ने रक्सी पिएर हो र मर्ने पनि रक्सी पिएरै हो भन्ने कथा निर्माण गरेका छन् । उनीहरूविरुद्ध मैले पनि शब्दका मिसाइलहरू छाडेँ । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न नसकेपछि मेराविरुद्ध विभिन्न अभियान नै चलाए । नेपाली समाज वर्ग, लिंग, वर्ण, भाषा क्षेत्रमा विभाजित छ । मेरा मित्र र शुभचिन्तक मात्रै छैनन्, शत्रुहरू पनि छन् । जसको स्वार्थविरुद्ध लेखेँ, उनीहरूले नै मेरोबारे यस्तो अपवाह फैलाए ।’
अन्तरजातीय बिहे गर्दै गुरुङ्सेनी भिœयाएका बाहुनका छोरा हुन्, खगेन्द्र संग्रौला । उनकी श्रीमतीले पटक–पटक भन्ने गर्छिन्, ‘गुरुङसँग बिहे गरेको भए लाहुरे भएर सुनले त छपक्क ढाकिदिन्थ्यो, तर रक्सी खाएर दुःख दिन्थ्यो । यही सम्झेर बाहुनसँग बिहे गरेँ, झन् ठूलो जँड्याहाको फेला पो परेँ ।’ यसलाई संग्रौलाले आधा सत्यको रूपमा ग्रहण गर्छन् । रक्सी पिएर दर्जनौँपटक श्रीमतीसँग झगडा गरेका संग्रौलालाई यति भन्नु सायद श्रीमतीको बाध्यता पनि थियो ।
तर, संग्रौलाले बिहेअघि नै रक्सी जिन्दगीको सुरुवात गरिसकेका थिए, जानेर होस् वा नजानेर ।
‘म लिम्बूवानमा हुर्केको मान्छे । बाक्लो बस्ती थियो । साथीहरू सुँगुर धपाउने, चरा मार्ने, फुल चोरेर खाने, काँक्रा चोर्ने थिए । सानै छँदा बुबाले एउटा काम अह्राउँदै मित बाकोमा पठाउनुभयो । पुस महिनाको जाडो थियो । मेरो शरीर लगलग कामिरहेको थियो । मितबा डबकामा केही तान्दै हुनुहुन्थ्यो । गाला र कान राता थिए,’ संग्रौलाले कहानी हाल्न थाले, ‘दिउँसोको ११ बजेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, साह्रै जाडो भएछ हो काइला ! कान पो राता पारूँ हो काइला ! मित आमाले डबकामा बाफ उँडिरहेको केही लिएर आउनुभयो । मैले स्वाट्टै पारेँ । त्यसपछि मैले सबै बिर्सेछु । त्यहीँ सुतेछु ।’
यो उनको जीवनकै पहिलो मदिरा अनुभव थियो । वास्तविक रक्सीसँग उनको जम्काभेट भने लमजुङको खुदीमा पुगेपछि भएछ । तर, त्यसअघि उनले काठमाडौंका केही पसलहरूमा नपिएका भने होइनन् ।
०२७ सालमा शिक्षकको भूमिकामा उनी खुदी पुगेपछि एक्लिए । फोनको कुरा त परै जाओस्, रेडियोसमेत टिप्दैनथ्यो । निकै अनकन्टार ठाउँमा पुगेर उनले विद्यासँग पैसा साटेर जीवनका योजना बुन्न थालेका थिए । एकजना मगर्नी आमैकोमा खाना खान्थे रे उनी । हिनुवाको अर्को पेग सुक्र्याउँदै उनी लमजुङको सम्झनामा फर्किए, ‘दाल भात त निहुँ मात्र थियो, उनको खास व्यापार त रक्सी थियो । पुस्तक पढ्दा–पढ्दा वाक्क बनेको मेरो अँध्यारोको साथी रक्सी बन्न थाल्यो । त्यसपछि रक्सीमा लत नै बस्यो ।’
काठ्माडौं फर्किएपछि पनि उनलाई संगतले मदिरासँगै रमाउने बनायो । भन्छन्, ‘मेरा साथीहरू उच्चस्तरका मदिराप्रेमीहरू हुनुहुन्थ्यो । सुरुसुरुमा भट्टीमा पनि गइन्थ्यो । धेरैले आँखा सन्काउँथे । तर, त्यो टेबुलमा बसेपछि सिद्धान्त, बहस, राष्ट्रभक्ति सबैका कुरा हुन्थे । माध्यम त्यही रक्सी थियो । धेरैपटक पाँच रुपैयाँको लोकल ठर्रा पनि खाइयो ।’
तर, आफूलाई दैनिक मदिरा भने नचाहिने उनी दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ हप्ताभरि पनि खाइयो होला, कहिले हप्ताभरि खाइन्थेन ।’
मदिरा सेवनपछि कहीँ कुनै सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने काम नगरेको बताउने संग्रौलाको घरमा चाहिँ रमिता नै भएको रहेछ । एउटा उदाहरण सुनाउन कस्सिए, ‘रुसी लेखक निकोलाई गोगोलको ‘गभरमेन्ट इन्स्पेक्टर’ भन्ने नाटकको नेपाली अनुवाद गरेको थिएँ । त्यसलाई रसियन कल्चर सेन्टरले प्रदर्शन गर्ने भएछ । रिहर्सलमा मलाई पनि बोलाइयो, गएँ । बेलुकीपख निर्देशकले कक्टेलको अफर गर्नुभयो । त्यहाँ भोड्कै थियो, मेरो प्रिय भोड्का । पिएँ । साथीले नै गाडीमा छाडिदिनुभयो । तर, घर पस्नुअघि मेरो टोलका मदिराप्रेमीहरूसँग ‘कम्पनी’मा पसेँ । त्यहाँ एक अर्थविद् र अर्का कवि थिए । त्यतिवेलासम्म म ठीकठाक नै थिएँ । एक पेग रोयल स्टेग पिइहालेँ । त्यसपछि किन हो मेरो जिब्रो लरबरिन थालेछ । घरको ट्वाइलेटभित्र पसेर चुकुल लगाएँ । त्यहीँभित्र हराएछु । केही छिनमा श्रीमती कराउन थालिन् । बल्लतल्ल बाहिर निस्किएँ ।’
मदिरा सेवनका यस्ता कहानी सुनाउँदै गर्दा संग्रौलालाई कुनै अपसोच छैन । उनी भन्छन्, ‘संसारमा कोही पनि दुर्गुणविनाका असल मान्छे हुन सक्दैनन् । चाहे बुद्ध हुन्, गान्धी वा माक्र्स नै किन नहून् । म पनि धेरै दुर्गुणले भरिएको एउटा मान्छे हुँ । मबाट कसैले ५१ प्रतिशत असल गुण फेला पार्छ भने त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । मलाई आदर्शवादी देखिनु छैन । म वामविचारधाराको पक्षपाती हुँ, तर ढोँगी होइन । सामन्ती समाजमा पर्दापछाडि बेविचार राख्नेहरू पनि पर्दाअगाडि धुनधान शुद्ध, सङ्लो बन्न खोज्छन् । म थुप्रै दुर्गुणसहितको मान्छे हुँ । तर, सार्वजनिक समाजले मप्रति राखेको अपेक्षा र मेरा दायित्वलाई मैले कहिल्यै बिर्सेको छैन ।’
लेखक संग्रौला मदिराकै मञ्चमा चहार्दै गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपीओलीको टेबुल पनि सेयर गर्न पुगेका रहेछन् । उनैले खोले यो रहस्य । भने, ‘मदिराको टेबुलमा प्रचण्ड खुबै
रोमान्टिक हुनुहुन्छ ।’
यद्यपि, संग्रौलाको मदिरासम्बन्धी केही मतहरू छन् । कुन वेला खाने, कस्तो खाने, कस्ता मान्छेसँग खाने, कसको निम्ता मान्ने र कसलाई निम्ता गर्ने विषयमा उनी आफूलाई निकै कठोर दाबी गर्छन् । ‘मदिरापानपछि ठूला कुरा गर्ने, ट्राफिक जाम गर्ने, महिलाहरूलाई अपमान गर्ने, ठूलो स्वरमा बोल्ने मान्छेहरू लामो समय मेरो टेबुलमा रहेनन् । म आदर्शवादी सामाजिक न्यायमा समानता, अवसरबाट वञ्चित, विकासको निम्ति अवसर नपाएकाहरूको पक्षपाती हुँ र मेरो टेबुलमा पनि मत मिल्नेहरू नै हुन्छन्,’ यति भनेर संवादको बिट मारे ।